जिल्ला समाचार : ललितपुर
मेचीकाली : 2018-09-02 13:54:24
ललितपुर, १७ भदौ (रासस): पाटनको प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा आज बिहानैबाट भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । श्रीकृष्ण जन्माष्ठमीका अवसरमा काठमाडाँै उपत्यकाका अधिकांश स्थान र उपत्यका नजिकका जिल्लाबाट दर्शनार्थी यहाँ आउन थालेका छन् । विसं २०७२ को भूकम्पपछि यो वर्ष मात्रै दर्शनार्थीले मन्दिरभित्र गएर माथिल्लो तलामा रहेको कृष्णको मन्दिरमा दर्शन गर्न पाएका हुन् ।
ललितपुर, २७ जेठ : तीन दशक पहिलेसम्म चितवान जिल्लामा ३१२ जातका धान किसानले रोप्थे । अहिले तीमध्ये अनदी जात बाहेक अधिकांश धानका जात हराइसकेका छन् । स्थानीय जात नै लगाउँछु भनेर किसानले खोज्दासमेत पाउने अवस्था छैन । चितवानमा मात्रै होइन देशका अधिकांश क्षेत्रमा उन्नत र हाइब्रिड जातको धानको बीउको प्रयोग बढ्दै जाँदा स्थानीय जात हराउँदै हो ।
मेचीकाली : 2018-05-28 13:25:22
ललितपुर, १४ जेठ : सुनाकोठीका हरी महर्जनलाई गत चैतदेखि अर्थात् वर्षा पहिले नै पानी परिरहेकाले कतै असारमा सुक्खा भएर धान रोप्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता छ । पहिले पहिले वैशाख– जेठमा गर्मी र असार लागेपछि वर्षा शुरु हुन्थ्यो । अहिले कुन महिनामा कस्तो मौसम हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन । त्यसैले असारमा पानी नै नपरेर सुक्खा हुँदा रोपाइँ गर्न नपाइने हो कि भन्ने महर्जन चिन्ता गर्नुहुन्छ ।
मेचीकाली : 2018-05-24 14:00:28
ललितपुर, १० जेठ : नेपालमा बासना आउने चामलको माग बढेपछि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले त्यसमा अध्ययन थालेको छ । नार्कअन्तर्गतको कृषि विज्ञान महाशाखाले नेपालमा अहिलेसम्म पहाडी क्षेत्रमा बासना आउने चामलका लागि धानको बीउ सिफारिस गरेको छैन ।
मेचीकाली : 2018-05-16 08:44:29
ललितपुर, २ जेठ : रातो मच्छिन्द्रनाथको यात्राका विषयमा आज ललिपुरको बुङ्मतीमा विचार पूजा गरिँदै छ । के कसो भयो भनेर जान्न पूजा गर्न लागिएको हो । वैशाख ३० गते जावलाखेलमा भोटोजात्रा सम्पन्न गरिएपछि नाथलाई तामदानीमा राखेर जावलाखेलबाट बुङ्मति लगिएको थियो ।
विमान दुर्घटनापछिको कोटडाँडा (फोटो फिचर)
कृष्ण मन्दिरमा बिहानैदेखि घुइँचो (फोटो फिचर)
बुद्ध एयर विमान दुर्घटना-कसरी भयो दुर्घटना ? के भन्छन् प्रत्यक्षदर्शी ?
वुद्धएअरको विमान दुर्घटना, विमानमा सवार सबै १९ जनाकै मृत्यु
कुम्भेश्वर महादेवमा भक्तजनको भीड (फोटोफिचर)
केपी ओली भन्छन्, 'पर्शुरामलाई संरक्षण दिएर महेशले ठीक गरे'
चार जिल्लामा १६ हजार एड्सपीडित
ठेचोमा खुवा पाइन छोड्यो
रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा (फोटो फिचर)
आज मच्छिन्द्रनाथको भोटोजात्रा
बलात्कारी शिक्षक पक्राउ
मछिन्द्रनाथको रथलाई कारको ठक्कर
नेपालको वैदेशिक व्यापार बढ्यो
हल्लाले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा तनाव
पाटन अस्पतालको टेलिमेडिसिन सेवा
ललितपुरमा होमस्टे कार्यक्रम
मोटरसाइकलमा ब्रेक लगाउँदा उछिट्टिएर किशोरीको मृत्यु
राजधानीमा फेरि गोली हानेर मान्छे मारियो
लामो बहसपछि युनिटी प्रकरणको फैसला, १२ सञ्चालकलाई सजाय दिएर सयजनालाई सफाई
निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनका लागि कार्यशाला